केन्द्रमा बसेर सीमा सु’रक्षा हुँदैन, सीमा रक्षाका लागी बो’र्डरमै पुग्नुपर्छ – डिआइजी सुरज श्रेष्ठ ! – Life Nepali
केन्द्रमा बसेर सीमा सु’रक्षा हुँदैन, सीमा रक्षाका लागी बो’र्डरमै पुग्नुपर्छ – डिआइजी सुरज श्रेष्ठ !
काठमान्डौ। नेपाल-भारत सीमा यतिबेला ट’ड्कारो रुपमा सुनिँदै आएको छ। भारतीय प’क्षले नेपाली भूमिलाई समेत स’मेटेर नक्सा निकालेको भन्दै यसको च’र्को वि’रोध भएको छ। सडकदेखि सरकारसम्म यो विषयमा यतिबेला च’र्चामा छ। भारतका तर्फबाट ए’सएसबी सीमा सु’रक्षामा ख’टिएको छ भने नेपालको तर्फबाट एक दशकभन्दा बढीदेखि स’शस्त्र प्रहरी ब’लले सीमाको र’क्षा गर्दै आएको छ। तर पनि सीमा वि’वाद भने ब्युँ’तिदै आएको छ।सीमा सु’रक्षाको जि’म्मेवारी पाएको स’शस्त्र प्रहरी ब’लका प्रवक्ता तथा डिआइजी सुरज श्रेष्ठ भन्छन -स’शस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ आएपछि ग’ठन भएको सु’रक्षा फौ’ज स’शस्त्र प्रहरी हो।
त्यस बेलाको अ’वस्थामा राज्यको आवश्यकता छुट्टै थियो। राज्य आन्तरिक द्व’न्द्वमा फ’सेको थियो। द्व’न्द्व व्य’वस्थापन गर्न र द्व’न्द्वको मा’रमा परेका जनतालाई सु’रक्षा पुर्‍याउन भनेर हामी प’रिचालित भयौं। पछि २०६३ सालपछि शा’न्तिवार्ता भयो र स’शस्त्र द्व’न्द्व गरेको पार्टी मू’लधारमा आयो। त्यसपछि स’शस्त्र प्रहरीले सीमा सु’रक्षाको औपचारिक जि’म्मेवारी पाएको हो। जुन कुरा स’शस्त्र प्रहरी ऐ’न २०५८ मै उल्लेख पनि छ। स’शस्त्रले पाएका विभिन्न जि’म्मेवारीमध्ये सी’मा सु’रक्षा गर्ने एक प्रमुख जि’म्मेवारी हो। २०६३ सालदेखि हामी सीमा सु’रक्षालाई प्र’मुख प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढिरहेका छौं।
सीमा सु’रक्षालाई सु’दृढ गर्दै लै’जाने क्र’ममै छौं। सीमा सु’रक्षा भनेको खाली के’न्द्रमा बसेर मात्रै हुँदैन। हामी बो’र्डरमा पुग्नै पर्छ। नि’गरानी राख्नै पर्छ। यदि पहिला नै ग’ठन भएर सा’धन-स्रोत सहित ज’नशक्ति ख’टाउन पाइएको भए त यहाँ यस्तो छ, यहाँ यस्तो छ भन्ने व’स्तुस्थिति थाहा हुन्थ्यो नि। बि’ओपी राख्ने यो’जना भए पनि त्यस किसिमको सा’धनस्रोत जु’टिसकेको छैन। अब जस्तो उत्तरमा त्यही भएको विद्यालयहरु, अ’ड्डाअदालतहरु प्रहरी चौ’कीहरु,अन्य अ’फिसहरु जाडो समयमा सबै तल झ’र्छन्। उनी हरु बस्न सक्ने अवस्था छैन। अनि हामी गएर कसरी बस्ने? उता भारतीय आ’इटिबिटी सु’रक्षा फौ’ज बसिरेहका छन्।
उनीहरुले त्यो किसिमको साधनस्रोत जु’टाएका छन्। त्यसको लागि मात्रै उनीहरुसँग ४ वटा हेलिकोप्टर स्ट्या’न्डबाई हुन्छ। उनीहरुको रा’सन सप्लाई नि’यमित हुन्छ। कोही घा’इते तथा बि’रामी भए त’त्काल रे’स्क्यु गर्न सकिन्छ। त्यो मो’रल छ र पो सु’रक्षा फौ’ज बस्छ। दार्चुला सदरमुकामबाट टिं’कर पैदल पुग्न ६ दिन लाग्छ, नेपालको बाटोबाट जाँदा। अहिले त्यो एउटा बाटो पनि ब’न्द भएको छ। टिं’कर नजिक पुग्दा छां’गुदेखि अगाडि जाँदा ठूलो भी’र छ। पहिला गोरेटो बाटो थियो। अहिले त्यो बाटो पनि बि’ग्रेको छ।
मान्छे आ’वतजावत नै बन्द छ। त्यस्तो अ’वस्थामा भोलि सु’रक्षाकर्मी बि’रामी भयो भने के गर्ने? त्यो सबै व्य’वस्था मिलाएर पो पठाउनु पर्‍यो। पठाउन त पठाउने, जाने। सबै सा’धनस्रोत र अ’वस्था त मि’ल्नुपर्‍यो नि। राज्यले त्यो किसिमको सा’धनस्रोत मि’लाइदिनु पर्‍यो। अनि हामी नजाने भन्ने कुरै छैन। हामी जानु पर्छ। हामीलाई सा’धन देऊ, स्रोत देऊ भनिराखेकै छौं नि।
Previous देशभरका सबै सार्वजनिक सवारी साधनमा नेपाल भ्रमण वर्षको लोगो टासिने !
Next लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा नेपाली सेनाको टुकडी राख्नुपर्छः काँग्रेस